Archive du 20190910
Toamasina Renivohitra Hiady an-trano ny fianavakiana Ratsiraka ?
Manomboka miverina miakatra ny maripana eo amin`ny tontolo politika, indrindra amin`izao fotoam-pifidianana ben`ny tanàna izao. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa manerana an`i Madagasikara.
Fizotran`ny fifidianana Milamina amin`ny ankapobeny
Nitarika fivoriana niarahan’ny governemanta sy ny CENI ny praiminisitra Ntsay Christian, omaly, ho fijerena akaiky ny fizotry ny fanomanana ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolotsain’ny tanàna.
KMF Cnoe “Mila fahamatorana ireo mpanao politika”
Miisa 32 ireo kandidà amin` ireo kaominina 1 695 eto Madagasikara nanatitra antontan-taratasy filatsahan-kofidiana teny amin` ny OVEC amin` izao herinandro farany fanaterana raha ny tatitra voaray.
Imbiki Herilaza « Fametrahana ny demokrasia no zava-dehibe »
« Maro ireo lesona azo raisina nandritra ny kabarin`ny Papa Fransoa ary tokony horaisina na ny fitondram-panjakana na ny vahoaka Malagasy », hoy Imbiki Herilaza, mpahay lalàna.
Tabera Randriamanantsoa Nanakiana mafy ny filoha Rajoelina
Nanao fianianana teny Iavoloha ary nanoloana ny Papa Fransoa ny filoham-pirenena Malagasy, Andry Rajoelina, hoy ny filohan’ny CRN na komitin’ny fampihavanam-pirenena, Tabera Randriamanantsoa,
Hetsi-panoherana ny hosoka ara-pifidianana “Tsy misy mpitondra nangala-bato haharitra eo”
Mbola mitaky hatrany ny hitondran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenena fanazavana sy porofo ny maha tsy mitombina ny fitoriana miisa 684 nandritra ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ny Hetsiky ny Olom-Pirenena Miady amin’ny Hosoka sy Hala-bato amin’ny Fifidianana na ny HOM2HF tarihin-dry Rakotomalala Henri.
Antoko FTPFM “Tsy tokony hatao fitaovana politika ny tanora”
Tsy tokony hatao fitaovana politika intsony ny tanora, indrindra fa ny mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo, hoy ny filohan’ny antoko FTPFM avy any Fianarantsoa.
Fiaraha-miasan’ny CUA sy Easy Park Tsy misy idiran’ny resaka fifidianana
Efa voasonia tamin’ny taona 2015 ny fifanarahan’ny CUA sy Easy Park ary maharitra 15 taona, hoy i Tiana Rasamimanana, tompon’andraikitry ny serasera ao amin’ity orinasa tsy miankina misahana ny fiantsonan’ny fiarakodia eto Antananarivo ity.
Fivondronan’ny mpino Silamo Miandrandra firaisankina sy fampihavanana amin’ny Kristianina
Nampiray ny fikambanana maro samy hafa, ny antoko politika samy hafa firehana ny fahatongavan’ny Papa Fransoa, nandritra ny fivahinianany apostolika nataony teto amintsika.
Basket Tompondaka N1 A dingana faha-2 Nihoitra teo amin’ny andro faha-3 ny Ascut Atsinanana
Aty amin’ny andro faha-3 amin’ny fifaninanana basikety fiadiana ny ho tompondaka nasionaly 2019 sokajy N1 A lahy sy vavy vao nifoha tamin’ny
Cosafa Women U 17 – Maurice 2019 Ao amin’ny vondrona B no misy ny vehivavy Malagasy
Hotanterahina atsy amin’ny nosy Maorisy manomboka amin’ny 20 ka hatramin’ny 29 septambra izao ny fifaninanana baolina kitram-behivavy, ny Cosfa U 17.
Gare Makis Andohatapenaka Handray fiara miisa 196 avy eny Ambodivona
Manodidina ny 196 eo ny isan’ireo fiara hifindra eny amin’ny tobim-piantsonana Gare Makis Andohatapenaka raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra avy amin’ny kaoperativa mampitohy ny lalam-pirenena faharoa (Tana-Toamasina) sy lalam-pirenena fahadimy (Tana-Fenerive Est) manomboka ny 20 septambra ho avy izao.
Vovoka sy hatsiaka teny Soamandrakizay 1 namoy ny ainy, 15 naiditra hopitaly
Renim-pianakaviana mpizaika iray 60 taona no namoy ny ainy tampoka ny alin’ny sabotsy 7 septambra lasa teo teny Soamandrakizay nandritra ny lamesa goavana niarahan’ireo mpino marobe tamin’i Papa Fransoa teny an-toerana.
Varotra «Couche culotte» lany daty Nidoboka am-ponja ilay Sinoa tetsy Behoririka
Any am-ponja no miandry ny fitsarana azy ny lehilahy teratany Sinoa iray voasambotry ny sampandraharahan’ny polisy miady amin’ny kolikoly (SCLCC), ny alakamisy 5 septambra teo, noho ny fivarotana entana efa lany daty.
Halatra omby aman’ondry an-jatony tany atsimo Mandeha ny fanadihadian’ny Zandary
Natolotry ny miaramilan’ny Tafika Malagasy ny zandary mpanao fanadihadiana amin’ny famotsiana sy halatra omby ary ny kolikoly ny raharaha mahakasika lehilahy iray mety ho tompon’ny atidoha amin’ny halatra omby avy amin’ny faritra telo.
Fikambanan-jiolahy Nadoboka am-ponja ilay mpangalatra sy ny mpanao varo-maizina
Any am-ponja no miandry ny fitsarana azy ireo tambajotran-jiolahy tra-tehaka. Lehilahy roa no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny kaomisaria CSP6 Ambohimanarina ny 5 sy 6 septambra lasa teo teny Andraharo sy 67ha noho ny halatra miharo vaky trano.